Kulankii lagu balansanaa ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo la hakiyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKulankii lagu balansanaa ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo la hakiyay
March 31, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Kulankii lagu balansanaa ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo la hakiyay. [Sawirka]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kulankii lagu balansanaa ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la hakiyay kadib soo jeedin katimid Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda ee SONNA.
Maanta oo Sabti ahaa ayaa lagu balansanaa in baarlamaanka ay kulan ku yeeshaan Muqdisho si ay codka kalsooni siinta ah ugu qaadaan guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cusmaan Jawaari.
June 30, 2018 Xeer-ilaaliyaha Guud ee Puntland oo codsaday in la soo qabto xisaabiyihii Wasaaradda Maaliyada Puntland ee gobolka Mudug
August 8, 2018 Dowladda Federaalka Soomaaliya oo taageertay go’aanka uu Sucuudigu ka qaatay khilaafka kala dhaxeeya Canada
June 16, 2018 Maxay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan ee ay isku afgarteen Madaxweynaha Soomaaliya iyo Raysulwasaaraha Itoobiya?
Dhismaha derbiga xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo si kumeelgaar ah loo joojiyay
Roobab mahiigaan ah oo duufaano wata oo la filayo in ay ku dhuftaan deegaan xeebeedyada Puntland
Boosaaso-(Puntland Mirror) Roobab mahiigaan ah oo dabaylo culus wata ayaa la filayaa in ay ku dhuftaan deegaan xeebeedyada Puntland ee Badweynta Hindiya maalamaha soo socda, sida ay sheegeen dadka hawada saadaaliya. Si kastoo ay ahaataba, [...]